TCDD anaghị alaghachite azụ na nwatakịrị ịnye tiketi tiketi maka ọnwaTT | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraTCDD anaghị alaghachi azụ na HiT na-akwụ ụgwọ ndekọ kwa ọnwa
ndetu tcdd yht kwa ọnwa adabaghị na ọnụahịa tiketi
Na nzaghachi na TCDD Tesiacilik "nzaghachi dị oke ọnụ" gbasara tiketi ụgbọ elu (ọsọ), mgbe nhazi ahụ dabere na nkwupụta “nkwụghachi ụgwọ”, anya a gbanwere na usoro ọhụrụ a ga-eburu na njem ụgbọ oloko.
Olcay Aydilek nke sitere na Habertürk nwere ikike nke njikwa TCDD. Dika odi, enweghi nzọputa ozo na ugwo ohuru. Targwọ ọnụego ọhụrụ ahụ na-emetụta mmadụ 7 nke ihe dị ka nde mmadụ asaa na-agafe ụgbọ mmiri YHT kwa afọ. Ebumnuche nke TCDD Tasimacilik bụ iji belata mfu, nke bụ 350 ijeri TL kwa afọ, nwayọ; Increasebawanye ọnụ ọgụgụ ndị njem na ogo ọrụ dị iche iche ọkachasị na azụmaahịa nke ndị ọchụnta ego họọrọ. Enweghị iwu ọhụụ na-ahụ ka ọ na-akwụ ụgwọ tiketi tiketi nke NYT mgbe "mmezi ego". Mgbe mmụba dị mma n'ọrụ nri, a na-eji mmụba ọnụ ahịa ọnụahịa tiketi "ahịa azụmahịa".
TCDD Tasimacilik mere ụfọdụ usoro dị mkpa banyere ọnụahịa tiketi tiketi NYT, dị irè site na ụbọchị mbụ nke ọnwa a. Nke izizi, emere ndokwa maka tiketi klaasị azụmahịa. Ruo Jenụwarị 3, a ewepụla ego "klaasị azụmahịa".
Mgbe ahụ, uru nke ọnụahịa tiketi dị iche iche nke ndị na-eme njem n'otu usoro eji (dịka n'etiti Ankara-Eskişehir ma ọ bụ Ankara-Konya) na-ebelata ọnụego ego etinyere na tiketi ndị a. Mgbe nhazi a gasịrị, etinyere ego maka ego ọhụụ.
Gụ akụkọ zuru ezu site na isi iyi Pịa ebe
Gọọmentị France adịghị ada azụ n'agbanyeghị na a na-eji ụgbọ okporo ígwè (Video)
Ankara Sivas YHT Project na-erute Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ
Turhan na-ekwu okwu banyere ntinye aha YHT na ego Eurasia Tunnel
Na-alaghachi azụ na nchịkọta nke monopolies nke steeti ala si EU
TCDD Bandırma Port ekwuputala ọkwa mara mma maka iwu